Lohateny: Manamboara Audiograms ho an'ny Podcast-nao mba hampiroboroboana ara-tsosialy | Martech Zone
Talata, Novambra 9, 2021 Talata, Novambra 9, 2021 Douglas Karr
Ny indostrian'ny podcast dia mitombo hatrany ho an'ny orinasa. Hitanay ny fiantraika tsy mampino tamin'ny andian-tantara podcast izay nampiananay ireo orinasa natomboka – maro no mora miditra amin'ny isan-jaton'ny indostrian'izy ireo noho ny tsy fahampian'ny mpifaninana hafa. Podcasting dia fantsom-barotra mahafinaritra noho ny antony maromaro:
Voice - manome traikefa akaiky sy mahasarika ara-pihetseham-po izay ahafahan'ny vinavinao sy ny mpanjifanao manangana fitokisana sy mahafantatra ny marikao manokana.
fihazonana – te-hanampy ny mpanjifantsika hahomby isika rehetra… koa ny famolavolana tranomboky votoaty audio izay manampy azy ireo hampiasa ny vokatrao na hanabeazana azy ireo amin'ny serivisinao dia fomba tsara hametrahana zavatra antenaina, hanorina fahatokisana ary hahombiazana.
Testimonials – Ny orinasan'ny vokatra sy ny serivisy matetika dia miresaka momba ny endri-javatra sy ny tombontsoany, saingy tsy mizara ny tantaran'ny mpanjifany matetika. Ny fanadinadinana mpanjifa dia fomba tsara hanentanana ny saina sy ny fahatokisana ny marikao.
fanentanana - Ny fanadinadinana mpanentana sy mpitarika indostria ao amin'ny podcasto dia fomba tsara hiarahana fampiroboroboana ny vokatrao sy ny serivisinao ary hananganana fifandraisana amin'ireo olona mitarika ny indostrianao.
fizahana-taratra – Nitafatafa ho mpanjifa maromaro ho an'ny podcast-ko aho ary nanao sonia azy ireo ho mpanjifa amin'ny ho avy. Fomba iray tsy mampino ny firotsahana amin'ny varotra… ary mahasoa.
Izany hoe, mety ho sarotra ny podcasting. Manomboka amin'ny fandraisam-peo, fanitsiana, famokarana intros/outros, fampiantranoana, syndicating… mila ezaka daholo izany rehetra izany. Nizara a lahatsoratra feno tamin'ny lasa momba izany. Ary… aorian'ny famoahana ny podcast-nao dia mila mampiroborobo azy ianao! Ny fomba iray tena mahomby amin'ny fanaovana izany dia ny audiogram.
Inona no atao hoe Audiogram?
Ny audiogram dia horonan-tsary izay maka sary an-tsary ny onjam-peo avy amin'ny rakitra audio. Ny Y-axis dia maneho ny amplitude refesina amin'ny decibels ary ny X-axis dia maneho matetika refesina amin'ny hertz.
Ho an'ny tanjona ara-barotra sy haino aman-jery nomerika, ny audiogram dia rakitra video izay ampiarahina amin'ny sary ny feonao mba hahafahanao mampiroborobo ny podcast-nao amin'ny fantsona horonan-tsary toy ny YouTube na mampiditra azy ao amin'ny fantsona sosialy toy ny Twitter.
Ny lahatsary sosialy dia miteraka fizarana 1200% bebe kokoa noho ny votoatin'ny lahatsoratra sy sary.
Raha ny marina, tena gaga aho fa ny fantsona sosialy sy horonan-tsary dia tsy manana famoahana podcast mivantana ao amin'ny sehatra misy azy ireo ho amin'izany tanjona izany… Lohateny.
Lohateny: Ahoana no hamadihana ny Podcast ho Shareable Videos
Headliner dia sehatra fanitsiana sy fitantanana votoaty hanaovana horonan-tsary na horonam-peo azo zaraina ho an'ny podcasto. Ny fitaovan'izy ireo Automatic Podcast Videos dia manana maodely video promo podcast ary azonao atao mihitsy aza ny mamorona audiograms ho an'ny podcast anao avy amin'ny fampiharana finday Headliner.
Anisan'izany ny Headliner Features
Waveforms - Sambory haingana ny sain'ny olona ary ampahafantaro azy ireo ny feo podcast milalao miaraka amin'ny iray amin'ireo mpijery audio mahafinaritra
Horonan-tsary tsy voafetra - Ampiroborobo ny podcasto amin'ny horonan-tsary betsaka araka izay tianao, namboarina ho an'ny fantsona media sosialy rehetra
Fizarana feno - Avoahy ao amin'ny YouTube ny fizarana podcasto manontolo (2 ora max) ary ampidiro ny mpihaino vaovao
Audio Transcription - Adikao ho azy ny horonam-peo mba hampidirana lohateny amin'ny horonan-tsaryo mba hampitomboana ny firotsahana sy ny fidirana
Video Transcription - Ny headliner dia afaka mandika avy amin'ny horonan-tsary koa! Raha manana atiny ianao dia afaka manampy anao hampiditra lohateny
Audio Clipper - Safidio ny horonan-tsarimihetsika podcasto izay namboarina tsara ho an'ny fantsona sosialy tsirairay
Lehibe marobe - Manondrana ny horonan-tsarinao amin'ny habeny tsara indrindra ho an'ny tambajotra sosialy tsirairay sy mihoatra
1080p Export - Mijery tsara amin'ny efijery lehibe sy kely miaraka amin'ny horonantsary avo lenta feno
Text Animation - Misafidiana amin'ny sary mihetsika an-taoniny na mamorona anao manokana hanampiana ny fahalianana hita maso amin'ny horonan-tsaryo
Karazana Media rehetra - Manampia sary, horonan-tsary, feo fanampiny, GIF, ary maro hafa amin'ny tetikasa rehetra
Widget napetraka - Tao anatin'ny minitra vitsy, avelao ny mpitsidika ny tranokalanao hamorona haingana horonan-tsary Headliner
Signe-tokana - Namboarina ho an'ny mpampiantrano orinasa, mamela ny fidirana amin'ny kaonty tsy misy dikany sy ny fampifanarahana ny horonan-tsary miverina amin'ny CMS-nao.
Integrations - miaraka amin'ny Acast, Castos, SoundUp, Pinecast, blubrry, Libsyn, Descript, Fireside, Podigee, Stationist, Podiant, Casted, LaunchpadOne, Futuri, Podlink, Audioboom, Rivet, Podcastpage, Entercom, sy ny maro hafa.
Ity misy ohatra tsara momba ny Audiogram an'ny Headliner Podcast nampiantranoina tao amin'ny YouTube:
Ny tsara indrindra dia azonao atao ny manomboka Lohateny tsy andoavam-bola!
Misoratra anarana ho an'ny Headliner
Famoahana: Mampiasa rohy referral aho ho an'ny Lohateny izay ahafahako mahazo fanavaozana maimaimpoana raha misoratra anarana ianao.
Tags: 1080pacastclipper feosora-peoaudioboomaudiogramblubrrynatsipyCastosfamaritanatakariva amorom-patanafuturilohatenin-dahatsoratraahoana noLaunchpadOnelibsynPinecastWidget podcastPodcastpagePodiantPodigeePodlinkRivetSoundUpspareminStationistsary mihetsikafandikana videowaveforminona ny audiogramYouTube